UGabriele Siracusano Assicurazioni - Messina
Ubungcweti nekhono ekusebenzeni kwekhasimende
UGabriele Siracusano, ngo-La Farina 91 a Messina, uyikhono futhi uchwepheshe Umenzeli womshuwalense nesipiliyoni esisunguliwe emkhakheni kanye nokubambisana okuhlanganisiwe nenkampani yomshuwalense i-Unipol Sai. Izinqubomgomo Zokuphila, Izinqubomgomo Zempilo, Izimangalo, Izinqubomgomo Zemoto kanye Nezinqubomgomo Zempahla.
UGabriele Siracusano - Imikhiqizo Nemisebenzi ye-Unipol Sai
UGabriele Siracusano, nge-La Farina 91 e-Messina, ngenxa ye-Professionalism, Ukuncintisana kanye Nesipiliyoni esihlukanisayo, unikeza Amakhasimende akhe Isevisi ephelele ye-360 °: nge-Advisity eqondene nomuntu uqobo izokwazi ukukuqondisa ubheke eMkhiqizweni noma Insurance yomshuwalense ehlangabezana nezidingo zakho. Kusuka kwinqubomgomo yempilo kuya kwenqubomgomo yezempilo, kusuka kumabango kuya kumshuwalense wezezakhiwo. Ngenxa yokubambisana okwenziwe enye yezinkampani zomshuwalense ezibaluleke kakhulu, i-Unipol Sai Gabriele Siracusano inezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yomshuwalense nezinsizakalo ezitholakalayo ukuthola isisombululo esifanelana nezidingo zakho!
UGabriele Siracusano - Ukubonisana Okomuntu siqu
UGabriele Siracusano, nge-La Farina 91 eMessina, uchwepheshe onobuhlakani obukhulu kanye nesipiliyoni, oqhosha ngokuba khona okuqinile emkhakheni womshuwalense. Kwimikhiqizo Neminshuwalense Yomshwalense eqinisekiswe ukusebenzisana okuhlanganisiwe ne-Unipol Sai, uzothola i-Adentised Directorate enele ukuthola isixazululo esihlangabezana kangcono nezidingo zakho, isibonelo:
Izinqubomgomo Zokuphila Nezempilo;
I-Auto, Moto kanye nezinye Izinqubomgomo Zemoto;
Izinqubomgomo Zendlu, ukweba nezomlilo;
Amaphakethe Omshuwalense Wezinkampani kanye Nezazi.
Wonke Umkhiqizo Nensizakalo eqinisekiswe yi-Unipol Sai, kusuka ku-Pholisi Ye-Life kuya kwi-RC Auto, kusuka ku-Nqubomgomo Yezakhiwo kuya kwi-Pholisi Yezempilo kufundwa ngayo yonke imininingwane ukuhlangabezana nezidingo zakho zangasese. Ukuthembela kuMqeqeshi woMshuwalense onekhono nobungcweti njengoGabriele Siracusano kusho ukuthi uthola insizakalo ethembekile enoSizo Lomuntu uqobo ukuze avikele izifiso zakhe nezinto zakhe futhi aphile ngokuthula.
UGabriele Siracusano - Cela Ukubonisana Okomuntu siqu
UGabriele Siracusano, nge-La Farina 91 eMessina, ungowokubonisana nomshuwalense ofanele ukuphendukela kuye uma udinga ukuthatha inqubomgomo ukuvikela abathandekayo bakho nezimpahla zakho. Umkhiqizo Womshuwalense ngamunye kanye nensizakalo eqinisekiswe ukubambisana nenkampani yomshuwalense eyaziwa nge-Unipol Sai ifundelwa phansi imininingwane emincane kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ngenxa yezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo nezinsizakalo, uGabriele Siracusano uzokwazi ukuthola isixazululo esikufanele kunazo zonke ngokubonisana nomuntu uqobo futhi akuqondise ekukhetheni kwakho. Cela Ukubonisana Okomuntu siqu futhi uvikele konke okukhathalelayo ngenxa yesazi nochwepheshe we-Professional Insurance Consultant ukubheka ikusasa ngokuthula!
Ikheli: Nge-La Farina 91
Isihlalo 2: Via Frattina 73 - ROME
Ucingo: 06 69940241
Ucingo: 090 2921401
Umakhala ekhukhwini: 335 6205439
Yefeksi: 090 696501
Inombolo ye-VAT: 00470430836